V-Plus र Cognex दीर्घकालीन साझेदारी हो
कोग्नेक्सको बारेमा कुरा गर्दै, विश्वमा सब भन्दा प्रख्यात उद्योग क्यामेरा निर्माता, वर्षौं देखि V-Plus को साथ सहयोग गर्दै छ। साथै V-Plus, अब टेलसेन्ट्रिक टेक्नोलोजीमा एक ग्राउन्डब्रेकिंग कम्पनी हो र विश्वव्यापी रूपमा मेशिन भिजन अप्टिक्समा सबैभन्दा नवीन निर्माता हो। उच्च रिजोलुसनको साथ, लो ...
तपाइँको अनुप्रयोगमा उपयुक्त लेन्स कसरी छनौट गर्ने?
प्रोजेक्टमा जुन मेशिन दृष्टिमा, औद्योगिक लेन्स सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू मध्ये एक हो। त्यसोभए तपाईंको अनुप्रयोग वा प्रोजेक्टमा औद्योगिक लेन्स कसरी छनौट गर्ने भनेर कुरा गरौं। १. FOV, ऑप्टिकल म्याग्निफिकेसन र ग्राहकहरुबाट परियोजनाको दूरी दूरी स्पष्ट गर्न। जब औद्योगिक छनौट गर्नुहोस् ...
2D वा 3D मेशिन दृष्टि? किन दुबै छैन? यो धेरै वर्ष पहिले थिएन कि प्रणाली डिजाइनरहरू र इन्टिग्रेटरहरूले थ्रीडी मेशिन दृष्टिबाट बच्नको लागि जे गर्न सक्छन्। यसको लागि जटिल प्रकाश प्रणाली, धेरै प्रशोधन शक्ति, थप ईन्जिनियरि,, र अझ बढी पैसाको आवश्यक पर्‍यो। आज ...
सुझावहरू - तातो उत्पादनहरू - साइटम्याप टेलिसेन्ट्रिक लेन्स वस्तु, यूभी डीएमडी लेन्स, फिक्स्ड-फोकस लेन्स, ठूला ढाँचा चौडा कोण कोण लेन्स, द्वि-टेलिसेन्ट्रिक लेन्स, टेलिसेन्ट्रिक जूम लेन्स,